1962: Shlomo Helbrans mụrụ na Israel.
1988: Lev Tahor hiwere na Israel.
2000: A tọhapụrụ Shlomo Helbrans n'ụlọ mkpọrọ ma kpụga ya na Israel.
2000: Obodo Lev Tahor kwagara Canada.
Oge mbu 2000s: Lev Tahor gbasaa na United States, Canada na Britain.
2014: Lev Tahor hapụrụ Canada, ya na ụfọdụ ndị otu nọ na Guatemala, El Salvador na Mexico.
2017 (June): Helbrans kọrọ na mmiri riri ya na osimiri na Mexico.
Lev Tahor bụ òtù Hasidic. Aha ya, nke pụtara “obi dị ọcha,” sitere na Abụ Ọma (51, 12): “Kweerem obi dị ọcha, Chineke; ma mee ka mmụọ m guzosie ike n'ime m. ”N'akwụkwọ nke ya, otu a na-ahọrọ ntụgharị nke ọkara nke Ashkenazi nke aha ya, Lev Tohor. (Ọ gwụla ma egosipụtara ya, isiokwu a sụgharịrị mkpụrụokwu Hibru n'asụsụ Hibru nke oge a.)
Onye guzobere Lev Tahor, Shlomo Helbrans, (1962-2017) sitere na ochie Sephardic ezinụlọ Albaranes. A zụlitere ya n'okpukpe na-enweghị isi na mpaghara dị ala na West Jerusalem. Mgbe ọ na-aga ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ natara ọrụ nyocha iji nyochaa ndụ nke ndị Juu ndị Ọtọdọks siri ike na mpaghara okpukpe. Ọ gakwuuru otu n’ime obodo ndị kacha mkpa, ya bụ Satmar Hasidim. Ìgwè Hasidic a kasị ukwuu n'ụwa nabatara ndị Helbrans n'ụzọ na-ekpo ọkụ ma kpọọ ya òkù ịmụtakwu banyere okpukpe ndị Juu. Ọ bụ n'etiti ìgwè ahụ ka ọ natara ntọala siri ike na isi mmalite nke okpukpe ndị Juu.
N'ịbụ onye nakweere okpukpe Juu nke Haredi, Helbrans gosipụtara talent iji dọta ndị Juu na-ezighi ezi na ya. Ya ghọrọ onye rabaị na onye nkuzi Torah, na 1988 nke Arakhim, ndị ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ okenye bụ ndị na-akụzi okpukpe ndị Juu bụ ihe ka ukwuu n'aka ndị Israel na-enweghị iwu. Ga nke ọma na mgbasa ozi nke Juda, ọ malitere nwans nke ya, ma, n'ikpeazụ, otu Hasidic nke ya wee bụrụ Rebbe nke Lev Tahor. [Foto dị na aka nri]
O sitere na mgbe o gosipụtara Satmar ka o nwetara echiche ndị siri ike na-emegide Zaịọn. Omenala ndị Juu dị na mgbochi nke ndị Zionist metere ya. Vayoel Moshe, nke Rabbi Yoel Teitelbaum dere (1887-1979). (Cohen 2019) Teitelbaum bụ onye ndu ime mmụọ nke Satmar Hasidim na otu onye ama ama sitere n'ike mmụọ nsọ na Neturei Karta, nke bụbu ndị otu Hasidic Haredi (Haredi na-ezo aka na ndị Juu ahụ nke a kọwara dị ka Ultra-Orthodox na isi mmalite ndị ọdịda anyanwụ) nke guzobere na 1938 ma guzogidesiri Zionism ike).
Usoro Helbrans n'ụzọ na-adịghị agbanwe agbanwe maka idebe na okwukwe nke Juda, yana mgbasa ya dị irè nke mgbochi Zaịọn wetaara ya nkọcha na ime ihe ike, nke metụtakwara ezinụlọ ya. Na 1991, onye eboro ebubo ịnọgide na-enwe mmekọrịta na Hamas ma na-atụ egwu mbibi nke Ọchịchị Ọchịchị, ọ kwagara yeshiva na obodo ya na-agagharị na Brooklyn, New York. Ọ gara n’ihu ọrụ ya ebe ahụ, na-adọta ọtụtụ ndị Israel na-aga United States iji sonyere Lev Tahor. Otu n'ime ụmụ akwụkwọ ya erughi eru, nke a mere ka a maa Helbrans ikpe ịnyachi nwatakịrị. Ekpesara kpuchie ikpe a nke ukwuu na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Israel, na onye ọrụ nke onye nnọchi anya nke Israel bịara gere okwu ikpe ahụ, na-ekwugide onye na-azara ọnụ ya n'ihu ọha. Rebbe rụrụ mkpọrọ, ma chụga ya Izrel na 2000. Achọpụtabeghị ma ebubo ahụ amalitela kemgbe nwa ya nwoke kwuru na ikpe ahụ gbara ya na ezinụlọ ya na-emegbu ya. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, onye bụbu nwata akwụkwọ ahụ, onye bụla okenye ma bụrụ onye anya na-abụghị onye Lev Tahor, gara agbamakwụkwọ nke otu n'ime ụmụ Helbrans, nke na-eme ka ebubo ahụ nwekwuo obi abụọ.
N'ịga n'ihu na ọrụ ikwusa ozi ọma ya na Israel, Helbrans na ezinụlọ ya hụrụ na ụfọdụ ndị Hasidic na ndị agha Zionist lụsoro iro. Egwu jidere ya n'ụlọ ya, tụgbuo ụlọ ya, kpuchie isi ya ugboro ugboro (nwanyị nwanyị Haredi na-ekpuchi ntutu ya ma na-ekpori isi ya site na ya bụ mkparị na mkparị), ma kechie nwa ya nwoke dị afọ asaa. ruo na osisi wee hapụ ebe ahụ ọtụtụ awa. Mgbe ha nọsịrị afọ abụọ na Israel, Helbrans gbagara Canada ma chọọ nchebe n'ebe ahụ. Kọmịshọn na Ọpụpụ na Ọpụpụ na Ọpụpụ nke Canada kwupụtara rabaị onye rabaị si Israel. N'ime mmegharị nke a na-enwetụbeghị mbụ, Minista Ikpe nke Canada, ọkwá nke onye onye ọkaibe na-akwado Zionist mara ọkwa bụ Irwin Cotler, rịọrọ mkpebi ahụ, mana o kagbughị ya. Nke a nyere Helbrans ohere ịmaliteghachi ma gbasaa obodo ya na Sainte-Agathe-des-Monts, Quebec, obere obodo dị ihe dị ka otu narị kilomita site na northwest nke Montreal. [Foto dị na aka nri]
Mgbe ọ bi na Canada, Helbrans bipụtara edemede nke arụmụka Juu megide nkwenkwe, na-elekwasị anya na Zaịọnị na njirimara nke okpukpe Israel ọhụrụ, akpọrọ Derekh Hatsalah, Ofzọ mgbapụta (Helbrans 2001), yana ọtụtụ mpempe akwụkwọ Bekee, Hibru, Arabic na Persian. Ọ sonyere na mwakpo ndị na-emegide Zionist na ndị na-akwado ọchịchị Palestine wee gbaa ajụjụ ọnụ maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi Canada na nke mba ụwa, na-atụ aro ịmalite otu nzukọ 'World Anti-Zionist Congress.'
Ka ọ gara n'ihu na-adọta ndị Israel na Lev Tahor, Helbrans, albeit bi na Canada, ghọrọ ihe mwakpo ọha na eze na Israel, nke mbụ na mgbasa ozi, ma mesịa na nzuko omebe iwu Israel. N'ikpeazụ, nrụgide a sitere na Israel mere ka ndị ọrụ Quebec boro Helbrans nke mmetọ ụmụaka na ụlọ akwụkwọ iwu na-akwadoghị. N'ịchọ nnwere onwe dị ukwuu nke agụmakwụkwọ okpukpe na ịtụ egwu iwepụ ụmụaka n'ụlọ ha, ọ kwagara mpaghara nke obodo ahụ na mpaghara ndị agbata obi nke Ontario. Mgbe obere oge gasịrị, ndị ọchịchị Ontario gbasoro ihe nnọchi anya ndị ibe ha nke Quebec, nke mere ka Helbrans soro ọtụtụ ezinụlọ nke ụmụazụ gbagara Latin America.
Kọọ na, mmiri riri ya na mmiri na June 2017 dị na steeti Mexico nke Chiapas ka ọ na-eme emume emume n'ehihie nke ụbọchị izu ike. Ọnọdụ Helbrans nọgidere na-adị egwu. Akụkọ kwuru na ụlọ ọrụ nnọchi anya ndị Israel chọrọ ịnwe ozu ahụ ma egbochi ya ime ya. Onweghi nnwale. (“More na” 2017)
Lev Tahor na ndị ọzọ na-ekpe okpukpe Ọtọdọks nke okpukpe ndị Juu na-ekerịta ụkpụrụ nke ndị Juu. Ebe ọ bụ na Lev Tahor hiwere naanị na njedebe nke narị afọ nke iri abụọ, ọ nweghị ike ịdabere na ọdịnala a na-ebufere kama ọ ga -emepụta ọdịnala na ndabere nke ụdị Hasidic dị iche iche na, n'ozuzu ya, isi mmalite Kabbalistic. Ewezuga Satmar, mmeghari Hasid abụọ ndị ọzọ, tupu Agha IIwa nke Abụọ Chabad na Toldoth Aharon nyere mmụọ nsọ maka ntọala na ụkpụrụ omume Lev Tahor. A na-ekwusi ike na ichebe ịdị ọcha nke echiche na okwukwe, itinye uche n'oge ekpere, na iburu ebumnuche dị elu ụbọchị niile. Ebuliri ọrụ nke obi mmadu dika onye na-achi obi ya na ihe di nkpa iji zulite ihunanya na egwu Chineke. Nyocha zuru oke nke Hasidic na ihe odide omimi ndị ọzọ, gụnyere ihe odide Rebbe, bụ usoro ndị otu Leviahor na-eme kwa ụbọchị. Dika emere na mpaghara ndi ozo nke Haredi, omimi omumu ihe omimi na ihe omimi gbasara ihe edere ka edebere nye ndi mmadu. N'adịghị ka Satmar na-ahụkarị na ihe ndị ọzọ kwekọrọ na Chabad na Toldoth Aharon, a na-agba ụmụ nwoke nke Lev Tahor ume, gụnyere ụmụ nwoke na-alụbeghị di na-amụ akwụkwọ ndụ n'okpuru nduzi kwesịrị ekwesị.
Oppositionkpụrụ mmegide megide Zaịọn bụ akụkụ ọzọ dị mkpa ozizi nke Lev Tahor. Ọ dabere na akwụkwọ nsọ nke ikpe ziri ezi nke Chineke: Chineke na-ata ndị Juu ahụhụ maka mmebi iwu ha na ihe ọjọọ niile dakwasịrị ha bụ iji mee ka ha chegharịa. Site na nkpughari nkea gha ime ka nkowa nke ndi Ju si puta bu nnabata nke cheghariri. Lev Tahor na-eso nzọụkwụ nke isi mmalite ndị Juu, gụnyere amaokwu ndị doro anya na Pentateuch (Levitikọs 26: 27-33), na-ekwuputa na Mpụga ahụ bụ ntaramahụhụ mkpokọta maka mmebi iwu ndị Juu mere. N'ihi ya, isi iyi Talmud kwuru na ndị Juu emerụghị ụlọ arụsị na narị afọ mbụ OA (Oge Anyị). Naanị ụzọ a ga-anabata iji chụpụ ndị ndọrọ n'agha bụ ichegharị na ichere Mesaịa ahụ. A ga-enye Mesaya ahụ ikike ikpochapụ Mpụga ahụ na ọnọdụ nke nnwere onwe nke mmadụ niile site na nhụjuanya. Ya mere ndi ozo eji agha ha aghapu nihe banyere nka na nka nke mo ma agha nke ndi agha Rom merigoro.
A na-elekwa ndị Juu emere njem anya dị ka ndị nwere akụkụ dị mma, ohere dị mma iji weta ịdị nsọ nye ụwa dum site na mmezu nke ụkpụrụ ndị Juu. Dabere na nkuzi a, nke Lev Tahor so n'etiti ndị otu ndị Juu ndị ọzọ na-agba okpukpe Ọtọdọks kesara, atumatu nke steeti nke Zionist bụ ihe rụrụ arụ nke okpukpe ndị Juu na ihe ịma aka inye aka nke Chineke (Rabkin 2006). Na mgbakwunye, dị ka Derekh Hatsalah, mgbapụta Mesaya nke ọdịniihu ga-enwete inwe mmụọ ịchụ-aja. A ga-ebibi Jerusalem nkịtị ahụ ma jiri obodo nke eluigwe dochie ya, ebe ụwa dum nwere ike ịbụ ala nsọ dị omimi. Ọzọ, otu ndị ọzọ na - emegide Zionist, Neturei Karta na Satmar enweghị echiche doro anya n'okwu a.
Echiche ndị Juu na-emegide Zionist na-adaberekarị na nkuzi nke Oath Atọ. Talmud nke Babilọn (Kethuboth, 111a) na-akọ na, n’oge nke achụsasị ka ebibisịrị Templelọ Nsọ Jerusalem, Chineke tinyere iyi atọ: ịghara ịlaghachi oke na usoro a haziri ahazi na Ala Israel; ghara inupụ isi megide mba dị iche iche; ka mba di iche ghara kwa ichi Israel n'isi. Ọzọkwa, ọ bụ ihe a machibidoro iwu ka ndị Juu mee ngwa ngwa mgbapụta nke Mesaịa n'ike. Talmud na-enye ndị mmadụ ohere ịbanye Ala Nsọ, mana enwere nkwenye megide oke mbata na ọpụpụ. Ndị rabaị na-akpọ Oaths Atọ dị ka ihe mgbochi ejikọtara ọnụ, akụkụ dị mkpa nke iwu ndị Juu, na narị afọ niile (Ravitzky 1996: 211–34). Ha na-ekwusi ike na ọ bụrụgodi na mba niile ga-agba ndị Juu ume ka ha biri n'Ala Israel, ọ ka ga-adị mkpa ịhapụ ime nke a, n'ihi ụjọ imebi iyi ndị a. Ọzọkwa, ime mmehie ndị ọzọ n'ihi ọnọdụ siri ike nke Ala Nsọ ahụ na iwu ndị Juu nwere ike iduga na mpụga ka njọ karịa.
Kabbalah na Hasidism na-ele ndọta anya dị ka obodo emebi emebi na nke rụrụ arụ nke ụwa dum site n'ike nke ihe ọjọọ ruo mgbe ndozi nke mbara igwe, nke a na-atụ anya na ọ ga-eme na mbata nke Mesaịa. Agbali ọ bụla iji wepu ije n ’ụlọ site n’ụzọ mmadụ ga-, dị ka echiche a si dị, n’efu site n’ nkọwa.
Echiche a nke okpukpe na-anọchite anya nghachi Lev Tahor nke Zaịọn na ala nke Zaịọn. N'adịghị ka ụfọdụ ndị Haredim mere ka mmegide ha dị nro ma sonye na ndị ọchịchị Israel (oge niile na-ekwenye ọjụjụ echiche nke Zionism), Lev Tahor, dabere na nkuzi nke Rabbi Yoel Teitelbaum nke Satmar, na-ebuli mgbochi-Zionism ka ọ nwee ụkpụrụ. okwukwe. Nkwekọrịta ọ bụla ma ọ bụ nkwado ya na ndị Zionist, ọbụlagodi dịka ọrụ egbugbere ọnụ, a na-ahụta ka ọ bụrụ ụdị ndapụ nke mmụọ.
Lev Tahor jụrụ ihe ndị Zaịọn kwuru na steeti Israel na-anọchite anya ndị Juu nke ụwa ma na-ekwusi ike na njikọ nke okpukpe ndị Juu na nke Zionism, na-atụle nke ikpeazụ dịka “onye iro nke ndị Juu” (Hisachdus 2002: 12). Omume dị otu a abụghị iche na Lev Tahor ma ọ bụ ọ bụdị ndị Juu (Hart 2015), mana obodo Hasid a na-ekwupụta nke ọma na ịlụso Zionism ọgụ. Na 2000-2011, Lev Tahor nọgidere na-enwe mmekọrịta na mba Arab ma nabata ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ya na Sainte-Agathe. Lev Tahor na-ekwughachi nkwa ya ibi na udo na ndị Palestaịn n’okpuru ọchịchị ha, dịkwa ka ọtụtụ ndị Haredi ọzọ, kwenyere na iwere ike ọchịchị tupu ọbịbịa nke Mesaịa ahụ (nke, n’ezie, anaghị ele ya anya dị ka ihe omume ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa) bu ndu ojoo na ndu onwe ya. N'ịkọwapụta ịdị ọcha nke okwukwe, Lev Tahor na-ekwusi ike na ntakịrị nhazigharị na nkà mmụta okpukpe ndị Juu nke Kabbalah ga-egbochi onye jụrụ okwukwe site na towa nke Na-abịanụ, nke ndị Juu na-ekwukarị na Paradaịs.
N'ịnwa i imitateomi ndụ na Hasidic shtetls nke Eastern Europe, Lev Tahor Hasidim mụrụ asụsụ Yiddish iji zere iji asụsụ Hibru kwa ụbọchị, nke a na-akpọ 'asụsụ nke ịdị nsọ'. Ha anaghịzi akụziri ụmụ ha Asụsụ Hibru ọgbara ọhụrụ, nke bụ asụsụ ọtụtụ maka ha.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike, enwere ike ịhụ mkpebi siri ike ha dị ka mmeghachi omume na mbọ aka Eliezer Ben Yehuda, onye amụrụ Leizer Perlman (1858-1922) mgbe ọ hapụrụ asụsụ nne ya, Yiddish, maka Hibru na ọ “kọwaara” wee gbanwee gaa n'asụsụ obodo. Hasidim nke Lev Tahor kwenyere na ha na-eweghachi nsọ dị nsọ nke Hibru site na na-eji ya naanị maka ekpere na ọmụmụ Tora, mana na-ekwusi ike na ị na-asụ Yiddish n'etiti onwe ha, ma ọ bụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, tupu ha amụta Yiddish, asụsụ nke milieu na-abụghị ndị Juu. [Foto dị na aka nri]
Akwụkwọ Lev Tahor na-akwado nke ahụ
Zionism na eduru ndi Ju na ndi nile bi n’ala di nso nke Israel rue odachi. … Zaịọn zuru oke izu ike mana enweghị ntọala n'okpukpe ndị Juu. … A gha emezịzị ọchịchị Zaịọn, site na ọrụ ha niile na Ala Nsọ naanị mbibi na mbibi ga-adịgide (Hisachdus 2002: 4).
Ha na-ekwusi ike na steeti Israel bụ ihe ize ndụ ọ bụghị nanị maka ndị Juu Israel, kamakwa ndị Juu niile gburugburu ụwa. Ọzọkwa, dabere na nkọwa ọdịnala ndị Juu nke amụma nke amụma nke Akwụkwọ Nsọ na ọdịnala dị nsọ, Helbrans na-ekwu na Jerusalem ga-eme ka ọ tọgbọrọ n'efu dị ka ihe ga-eme n'ọdịnihu nke agha mgbaghara mmehie ga-eme n'ọdịnihu.
Ọzọkwa, dị ka Lev Tahor si kwuo, Israel abụrụla ebe dị nnọọ ize ndụ ibi, n’ụzọ anụ ahụ na n’ụzọ ime mmụọ ebe ọ bụ na ọbụna ndị Juu gbara mbọ ịlụso Zayọn ọgụ ga-esiri ya ike ịnọgide na-ebi ezigbo ndụ ndị Juu n’Ala Nsọ. Ya mere, Lev Tahor gbara ndị Juu Israel ume ka ha chegharịa maka nkwa ha mere n'oge gara aga na Zionism ma kwaga mba ndị ọzọ, ọkachasị ndị Alakụba, nke o lere anya na ọ dabara adaba maka ụdị ndụ ndị Juu Ọtọdọks. Onye dere akwụkwọ a kwujọrọ n'echiche ndị Zionist maka ịkpalite Oké Mgbukpọ ahụ ma dọọ aka ná ntị na ihe omume ndị Zionist nwere ike ibute ọdachi ọzọ ọbụlagodi maka ndị Juu ji obi ha niile fee Chineke.
Ozizi Lev Tahor na-enye echiche nke iwepụ udo nke steeti Zaịọn kama ịgbanwe ya na usoro ọchịchị. Ebe ọ bụ na steeti ndị Juu bụ ịjụ okwukwe n'onwe ya usoro ọchịchị Chineke ọ ga-abụ, dị ka Lev Tahor si kwuo, ọ kachasị njọ, nhazi zuru oke na nduhie. N'ihe dị larịị, ndị Juu ndị Haredi na-anabata echiche nke ọchịchị ụwa, nke ọchịchị onye kwuo uche ya, nke bụ ihe mbụ chọrọ nke PLO ma na-enweta ewu na-eto eto n'etiti ndị Palestian. Lev Tahor na-agbaso usoro ọdịnala nke na-enye ndị Juu iwu ibi n'okpuru ọchịchị nke mba ndị ọzọ na-eche ọbịbịa nke Mesaịa.
N'adịghị ka nke Teitelbaum Vayoel Moshe, ọkaibe ndị ọkà mmụta sayensị na-emegide Zionist gwara ndị rabaị na ụmụ akwụkwọ rabbi mmụta dị elu, Helbrans ' Derekh Hatsalah Edere ya n ’ụzọ dị mfe iji enweta ya. Nke mbụ ebuputara dị ka akwụkwọ dị obere, Derekh HatsalahNtughari ohuru ohuru ghutara ibu ukwu (Helbrans 2001). Akụkụ dị ukwuu nke akwụkwọ ahụ bụ ihe dịrị ndụ nke ịdị ọcha nke okwukwe, ekpere na nchegharị. Onye dere akwụkwọ a na-akpọ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ka ha gbanahụ ihe ọjọọ na mmetụta ọjọọ niile na mkpakọrịta niile, ọkachasị ndị okpukperechi nke Zionist, onye ọ na-ewere dị ka ndị ọchịagha na-eme ka ọ bụ naanị ya bụ ndị Juu dị ka aghụghọ diabolic. Ndị a bụ ndị na-eso ụzọ National Judaism (dati-leumi), ndi nke emere ndi Zionists na ndi n’adịghị ka Haredim, bụ ndị agwakọtara nke ọma na ọha Israel na-ahụkarị. Ọ na-akpọkwa ndị Juu ka ha soro na nzuko na ngagharị iwe nke Zaịọn ọha.
Na 2007, ndị obodo bidoro ibipụta ọtụtụ akwụkwọ ntanetị gbasara ntụgharị uche bara uru maka ihe dị n'ime. Na 2011, Helbrans jiri ọdịnaya ha bipụta mbido opus ya, Ohr Hashem, Ìhè nke Chineke (Helbrans 2011), ezigbo ndu bara uru na ntụgharị uche omimi. Isi akụkụ nke Ohr Hashem nwere ihe dị ka peeji 500, site na nkwupụta onye edemede dere ya na ntinye ederede zuru ezu. N’ezubere ịbụ nke izizi olu n’otu n’otu, akwụkwọ a na-ejikọ nkà mmụta sayensị Kabbalistic na echiche ọgụgụ isi na usoro ntụgharị uche bara uru. Onye dere akwụkwọ ahụ kwusiri ike na onye ọ bụla ji obi ya niile na-achọ ihe gbasara mmụọ, agbanyeghị nwoke ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ onye Juu, mgbe ọ gbasasịrị ọzụzụ na omume mmekọahụ, ya na Chineke nwere mmekọrịta.
Na omimi, mgbe ha na-edeputa usoro ntụgharị uche ya, ode akwụkwọ jụrụ jụ Sefer ha-Brit, akwụkwọ a ma ama nke narị afọ nke iri na asatọ nke Rabbi Pinchas Eliyahu Horowitz nke Vilna (1765-1821), nke nwere ntụzịaka zuru oke banyere inweta ahụmịhe omimi. N'otu oge ahụ, Helbrans na-anabata ọrụ oku nke Rabbi Moshe Chaim Luzzatto (1707-1746), ụfọdụ ndị Hasidic ndị ọzọ jụrụ. Luzzatto, onye ọtụtụ ndị Kabbalist Italiantali, kwuru na mmụọ ozi nke onwe ya natara mkpughe ya.
Omume nke Lev Tahor na-eme nke ọma na nke ndị otu Hasidic ndị ọzọ, ọkachasị nke Satmar na Toldoth Aharon, nke na-agbaso ụkpụrụ omume siri ike na ekpere karịa ọtụtụ ndị otu Hasidic. N'ime njirimara ndị pụrụ iche bụ opekata mpe oge elekere ọkara tupu ekpere ekpere, ekpere toro ogologo karịa (ekpere ụtụtụ ụbọchị izu nwere ike iru elekere atọ), nke a na-agụkarị n'olu dara ụda, dịka Toldoth Aharon. Dị ka ọtụtụ ndị Juu Haredi, ndị ikom Lev Tahor na-eme nmikpu kwa ụbọchị na ịsa ahụ (miqwe) maka ịchacha mmụọ. Ndi Rebbe eweputala otutu takkanoth (iwu), nke n’eme ka njide njide onwe onye, ​​imeru ihe n’ike na ikewa mmadu. Ha nwekwara ike iwebata ibu ọnụ, nche abalị niile na omume ịkpa ọchị na omume ndị ọzọ metụtara obodo. Iwu ndị a sitere n'ike mmụọ nsọ ụfọdụ nke akwụkwọ ndị Juu, nke na-achọ ka a gbasie ike na idebe iwu ndị Juu. The takkanoth bụ ihe a pụrụ ịtụle dị ka ọdịnala na usoro omume nke Lev Tahor.
Lev Tahor Hasidim anaghị adabere na nhazi, ọbụlagodi asambodo kachasị sie ike nke ngwaahịa kosher ma na-ahọrọ nri ụlọ. Ha anaghịkwa atụkwasị obi n'ogbugbu ụmụ anụmanụ ndị obodo Hasid; ha na-eziga ndị otu ha ka ha gbuo mmadụ. Ndokwa a anaghị adịkarị mma, nke na -ebilata oriri na anụ ọkụkọ n'obodo Lev Tahor. Nke a kwekọrọ n'ihe ọha obodo mesiri ike n'omume iri nri dị mma, gụnyere izere usoro esiri esi mee nri na nke gbanwere mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Emeela ka ndị isi ojii ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị nọ n’obodo mepere emepe nwee ezigbo nlebara anya. N'Israel, Lev Tahor nwere aha ọjọọ a na-akpọ “ndị Taliban Taliban.” Ndị isi ndị a na-ezochi ụdị ahụ nwanyị, nke Lev Tahor kwuru na ọ bụ iwu nke ndị Juu chọrọ. Ọ bụ ezie na adịghị ahụkebe na Eastern European Ashkenazi milieu, a na-ahụkarị mkpo yiri nke ahụ ruo mgbe ndị Juu na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya. Ọtụtụ ụmụ nwanyị gbara ajụjụ ọnụ n'obodo, were otuto maka ibido omume a na maka ịkpụzi isi ndị a mana ọbụghị maka oke oke nkewa nke nwoke na nwoke ka ejikọtara n'etiti ndị otu Lev Tahor. [Ihe osise dị n'aka nri] N'adịghị ka ìgwè ndị Haredi ndị ọzọ, a gbara ụmụ nwoke Lev Tahor ume ka ha na-arụ ọrụ ubi, na-elekọta ubi, na-arụkwa ọrụ ndị ọzọ nke ilekọta obodo.
N'ikwekọ na ọtụtụ ndị ọzọ Haredim, Lev Tahor na-agba ndị Israel ume ka ha jụ idebanye aha na mmekorita ndị ọzọ niile na steeti Zionist. Ndị otu ya gbasara nkuzi ha site na nkuzi, broshuọ, akwụkwọ nta na ajụjụ ọnụ nke mgbasa ozi. Eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị otu Lev Tahor bụ ndị Israel na-enweghị iwu, bụ ihe nwere ike maka mmegharị ahụ. Ha nwere ike na-asụ asụsụ nke ndị Israel nkịtị, maara ihe gbasara ọnọdụ ha kwa ụbọchị wee chọta nghọta dị iche iche nke ndị Juu, gụnyere Sephardim (ọtụtụ ndị otu Lev Tahor, gụnyere ndị Rebbe, nke agbụrụ Sephardic). Nke a na - eme ka ha dịkwuo irè n'ịgbasa echiche ndị na - emegide Zionist karịa, dịka ọmụmaatụ, Satmar, nke na - elekwasịkarị anya na ndị otu ya. Mgbapụ a mejupụtara akụkụ mara mma nke Lev Tahor maka ndị sonyere na mmegharị ahụ na mgbakwunye ọzọ nke ibu iro megide akụkụ nke ndị Zionist na steeti Israel.
Dịka ndị Hasid niile, a haziri Lev Tahor gburugburu onye isi ya, Rebbe, onye na-eje ozi dị ka onye nlereanya, onye ndu ime mmụọ na ikike kachasị. Mgbe Shlomo Helbrans nwụsịrị, nwa ya nwoke aha ya bụ Nahman weghaara onye isi nke Lev Tahor. A na-eme atụmatụ na ndị otu ahụ mejupụtara ezinụlọ ole na ole nwere ndị na-akwado ndị mmadụ gburugburu ụwa. Nọmba amabeghị ọnụ ọgụgụ ndị ahụ.
Otu a bidoro site na ndị ọrụ nke Arakhim, ndị bụbu ndị na-anaghị elezi anya. Ndị Juu ole na ole ndị Ọtọdọks, site n'oge ụfọdụ na mpaghara ndị ọzọ Hasid, sonyekwara n'òtù ahụ. Isi nke Ta Ta Taho gbasoro onye ndu ya na Canada mgbe enyere ya ikike ibi ebe ahụ. A na-aru oru ufodu ndi otu n’ime ya dika ndi nkuzi n’ime obodo, ole na ole n’enye oru n’azu ndi otu a ihe bụ isi mmalite nke ego nwere ike bụrụ nke onyinye afọ ọma site n'aka ndị na - enye onyinye na mpụga Lev Tahor.
Ọtụtụ ndị otu Lev Tahor kwusiri ike na ihe dọtara ha na otu ahụ bụ nkwenye na ọ na-anọchite eziokwu, ya bụ maka ezigbo ndị Juu (ajụjụ ọnụ nke onwe, 2011). Fọdụ, gụnyere ụmụ nwanyị, kwuru na ịgụ akwụkwọ ahụ Derekh Hatsalah, tupu ha ezute Rebbe, mere ka ha ghọta na Lev Tahor raara onwe ya kpam kpam nye uche Chineke. Ihe ka ọtụtụ kwuru banyere mmeghe nke Rebbe maka ajụjụ na njikere ọ dị itinye aka na ndị ochie na ndị bịara ọhụrụ n'ọmụmụ ihe siri ike banyere isi mmalite ndị Juu, n'adịghị ka ha kwuru, ụfọdụ ndị rabaị ndị ọzọ na-etinye ụbụrụ.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mgbe niile, ndị gbara ajụjụ ọnụ chọtara ịdọ aka ná ntị oge ochie nke Judaic (Talmudic) megide ikike ịmụ nwa, hapụ ịlụ agha nke Ala Nsọ dị ka ihe mere ha ji emegide anti-Zionism, ma mesịa nye Lev Tahor. Usoro echiche Zionist na ịhụ mba n'anya mejuru ndị na-achọ azịza ajụjụ ha dị. Fọdụ ndị jere ozi n'usuu ndị agha Izrel jiri Zaịọn tụnyere ikpere arụsị nke chọrọ ịchụ mmadụ n'àjà. Ufodu ole na ole nke ndi Ju gh’aghachitara n’onye ezi obi na ido onwe ha n’okpuru Chineke sonyekwara n’obodo a. Ihe omuma nke ihe omimi banyere ihe omimi Juda mere ya na Lev Tahor n’ocha mara mma n’inyocha uche na-achọ ihe na-anaghị agbanwe agbanwe. N'ilekwasị anya n'echiche efu, ogologo ekpere na ntụgharị uche, [Foto dị n'aka nri] Lev Tahor na-adọta ndị Juu mụ anya n'ụzọ ime mmụọ kama ịchọ ndị na-akasi obi. Dịka a na-akọ, onye otu ọ bụla kwesịrị ịbanye iyi nke ịkwado Rebbe tupu isonyere ndị obodo (“More on” 2017). Omume a dị ụkọ n'etiti ndị Hasidic.
N'adịghị ka ndị isi ndị ọzọ nke obodo Hasidic ebe idu ndú dị ọtụtụ nke ukwuu, Helbrans enweghị ike ikwu na sitere na ndị rabaị ma bidozie otu ya. (Toldoth Aharon bu ihe omuma nke mbu bu nke ndi Hasid na-adighi nma, nke Rabbi Aharon Roth guzobere na Hungary, na 1920s.) Dika onye nnochita ohuru na-agbanweghi agbanwe nye uwa Hasidic, Lev Tahor na onye isi ya chere agha di elu ihu ibu Ndị osimiri Ọtọdọks ndị ọzọ nke okpukpe ndị Juu nabatara dị ka ihe ziri ezi. Ha nwere ihe ịga nke ọma ruo n'ókè Lev Tahor na-enwe mmekọrịta n'etiti ọtụtụ ndị Hasid, dị ka Satmar, Toldoth Aharon na Tosh.
Ihe ịma aka bụ isi nye Lev Tahor sitere na ụda olu ya nke Zaịọn na ịkọwachaghị nkọwa nke iwu Juda. Nke a na-akpasu iro nke steeti Israel na ndị na-akwado ya yana ndị ikwu na-emegide okpukpe nke ndị otu Lev Tahor. Eziokwu ahụ bụ na Lev Tahor na-adọta ihe ka ukwuu n’etiti ndị Juu ndị Israel na-adịghị elezi anya na-eme ka ọ pụta dị ka nnukwu ihe iyi egwu na ndị Israel na-emetụta ma na echiche na nke onwe onye.
N'echiche zuru oke, Zionism kwesiri ịgbanwe ndị Juu, obodo nwere ọrụ ngbanwe, ka ọ bụrụ mba nke enweghị ụdị dịka mba Europe. N'ihi ya, okpukpe ndị Juu bụbu ogwe aka nke ndị Juu, ga-enwekarị ihe ịchọ mma na nke ekwuru okwu maka ndị guzobere steeti Israel. Ọ bụ ezie na ndị Juu na-elele ihe fọrọ nke nta ka ha jụchaa Zaịọn dị ka heresị dị ize ndụ, ndị Zaịọn na-ekwenye ekwenye na ndị Juu okpukpe (ma ọ bụ dosim, okwu mkparị nke ọtụtụ ndị Israel ji mee ihe) ga-emetụta ọnọdụ oge a nke steeti Zionist, hapụ “ụzọ ochie ha. ”Ma sonye na ọtụtụ ndị Juu. N’agbanyeghi na enwere ndi si na Haredim nwupu, onu ogugu ha na-abawanye, ihe kariri n’ihi imu umu ha.
Mgbe ndị Juu nke Israel sonyere ogige Haredi nke a na-ebute nsogbu n'ezinụlọ ha. Ọtụtụ ndị nne na nna na nne na nna ochie enweghị ike ịghọta etu nwa nwoke ma ọ bụ nwa nwanyị gụrụ akwụkwọ nke oge a ga-esi nakwere ụkpụrụ oge ochie, ịdọ aka ná ntị siri ike na ibi ndụ zoro ezo. Ha na-ahụta ụmụ ha dị ka ndị e ji ịrọ òtù, ndị otu nzuzo na ndị ọzọ dị njọ. Nke a bụ eziokwu banyere ụmụ Ashkenazi nke ndị guzobere Israel nke mere ka ememe okpukpe ma nwee mmụọ ọhụrụ. Dị ka onye Israel na-akọ akụkọ ihe mere eme bụ Noah Efron si kwuo: ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke okpukpe, nwere egwu miri emi banyere Haredim:
Ọtụtụ ndị enyị na ndị ọrụ ibe m agwala m nke ọma banyere nrọ abalị nke Haredim na-ejide ma jide ya, na oge ụfọdụ, na-ata ya ahụhụ. … Karị, enwere mmetụta na mmadụ agaghị enwe nchebe, na agbanyeghị etu esi zụlite ụmụaka nwere uche, enwere ike ịrara ha n'ogige Haredi. ”(Efron 1991: 16, 18 – 19).
Egwu onwe onye na agwago echiche nke ndi mmadu na ndi Haredim iji meputa iro nke Lev Tahor nwetara.
Esemokwu a mere ka ndị ọchịchị Israel na ndị obodo na ndị mgbasa ozi mekọrịta ya. Dabere na akaebe edere nke ya, onye nnọchi anya ọrụ nzuzo nke Israel batara obodo. Agbanyeghị, n'ime ọnwa ole na ole onye ọrụ ahụ masịrị Lev Tahor masịrị ya ma sonye na ya, emesịa bụrụ onye isi abụọ na mpaghara. [Ihe ngosi dị n'aka nri] N'ihi nlebara anya ndị ọrụ nchekwa nchekwa nke Israel nyere ndị obodo, o yikarịrị ka mkpọsa a malitere mgbe ebiri obodo dị na Israel na ngwụsị 1980s.
Mgbasa ozi a lekwasịrị anya na mmegide Lev Tahor na Zaịọn, mana gbadoro ụkwụ ya na ọgwụgwọ ụmụaka n'ime obodo, nke gosipụtara akụkụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mkpọsa ahụ. Ndị ọchịchị Israel kwubiri na nkatọ Lev Tahor jụrụ steeti Israel na-aghọ ihe na-arụpụta arụmọrụ ebe ọ na-enye echiche nke ịtụle ndị otu Lev Tahor gbagara Canada dị ka ndị gbara ọsọ ndụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ihe omume telivishọn nke Israel kpọrọ Lev Tahor “òtù nzuzo dị ize ndụ” ma boro ebubo na ọ na-akpa nkata igbu ndị Juu niile na-adịghị elebara anya na Israel (ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke obodo ahụ). A na-ekwupụta ịdọ aka ná ntị na-enweghị atụ: "Lev Tahor na-anọdụ na Canada mana ogologo aka ya gbasara gbasara Israel."
Ọtụtụ ndị bụbu ndị otu Lev Tahor kpọrọ ya òtù nzuzo ma bo ya ebubo na mmetọ ụmụaka, ime ihe ike anụ ahụ na alụmdi na nwunye a manyere ụmụaka na-etorubeghị. Otú ọ dị, dị ka onye ndụmọdụ iwu nke ozi mba ọzọ nke Israel si kwuo “ruo ọnwa asaa ndị Canada Community Social Services lere obodo ahụ ma hụghị ihe akaebe nke mmegbu ma ọ bụ mmekpa ahụ" (Forte 2014). Eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ ahụ mere mwakpo ahụ ọtụtụ ugboro na-egosipụta esemokwu na-aga n'ihu ma a ga-ehiwe ebubo ndị a n'eziokwu. Otu dọkịta nwere ahụmahụ bụ onye nyochara ihe karịrị iri isii Lev Tahor ezinụlọ dị na Sainte-Agathe yana ndị nọọsụ gara leta ụmụ amụrụ ọhụrụ na nne ha n'ụlọ ha ahụghị ihe nrịba ama nke nleghara anya nne na nna ma ọ bụ mmejọ (Alamenciak 2014; Dumais 2015: 16).
N'ime mkpagbu nile nke Lev Tahor na Canada, Guatemala na Mexico enweghị nke gbara ebubo a gosipụtara n'ụlọ ikpe. Agbanyeghị, egosipụtara ha dị ka eziokwu na Israel, Canadian na ụwa mgbasa ozi (Kroth 2016). Mgbalị nile nke ndị ọchịchị Israel, ndị mgbasa ozi, ndị nne na nna na-adịghị akwụ ụgwọ nke ndị otu Lev Tahor yana ndị otu Zionist dị na Canada na ebe ndị ọzọ rụpụtara ka ndị mmụọ ozi juputara na obodo.
Otu ihe atụ na-egosi njikọ zuru ụwa ọnụ nke mkpọsa megide Lev Tahor. N’ọnwa Ọktọba 2011, ụmụ agbọghọ abụọ ndị Izrel, ndị, site na nkwenye nke nne na nna ha, chọrọ ka ha na Lev Tahor nọrọ ezumike ndị Juu, jidere ha mgbe ha bịarutere na Montreal ma gbochie ha ịga Sainte-Agathe. Ndị ọchịchị Canada na-eme ihe n'aha Israel na-ebo ebubo na ụmụ agbọghọ na-erughi ịlụ ga-alụọ na Lev Tahor. Na arịrịọ nke ndị ikwu ụmụ nwanyị nọ ebe dị anya, Israel machibidowo njem ụmụ nwanyị njem na mba ofesi, mana ọ gafere oge igbochi ha ịhapụ obodo ahụ. Ndị ọchịchị Canada gbasoro ihe ndị Israel mere ma zighachi ụmụ nwanyị abụọ a na Israel megide uche ha. Ikpe a mejupụtara esemokwu nke ọtụtụ ndị otu Lev Tahor: ndị nne na nna na-adịghị asọpụrụ na ndị ikwu ndị ọzọ ga-agafe isi nke ndị nne na nna nakweere okpukpe iji tinye mmachi na ụmụ ụmụ (“The Legal Battle” 2011).
A na-eme nnọkọ ndị omeiwu nke Israel na 2013, na nke nne na nna nwere iwe wee kwuo mkpu banyere ụmụ ha toro eto nke sonyere Lev Tahor. Ndị omebe iwu Israel tụrụ aro ka ụgbọelu Israel wakporo, à la Entebbe, na Sainte-Agathe, Quebec iji wepu ụmụaka na Lev Tahor. Emere ngosipụta n'ihu ụlọ ọrụ ndị nnọchianya Canada na Tel-Aviv na 2013 iji gosipụta ọnụnọ nke Lev Tahor na Canada. Ndị ọchịchị Israel, nke ndị pro-Israel na Montreal na-enyere aka, na-etinye nrụgide na ndị mmekọ Canada na Quebec (Infokatot), na ụlọ ọrụ nchebe ụmụaka na Quebec wakporo obodo ugboro ugboro, na-achọ ihe ịrịba ama nke mmetọ na nleghara anya nke ụmụaka. Uzo a nke ndi ochichi ruru eru dika “ihe nchoputa banyere nchebe umu aka” (Woods May 14, 2014).
Onye osote onye nnọchi anya gọọmentị nke Israel tụlere ebumnuche nke ntinye aka na ndị ọrụ nke ndị ọrụ nchekwa ụmụaka Quebec. Dabere na akụkọ gọọmentị Quebec, ebubo ndị a na-ebo Lev Tahor abịawo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị Israel: ndị ọka iwu na ndị uwe ojii Israel kpere ndị Quebec na ndị ọchịchị Canada ikpe na-ekwupụta "usoro agụmakwụkwọ anaghị anabata" na Lev Tahor (Dumais 2015: 6, 8, 10, 12) (Nkwa 17, XNUMX).
Na Mee 2013, di na nwunye nwere ụmụ isii, ndị ụlọ ikpe nyere iwu ka ha hapụ Israel, nwara ịgbaga na Jọdan iji sonyere Lev Tahor na Canada. Ha kwụsịrị ma laghachi na Israel. Enwere ikike igbochi ụmụ ha, agbanyeghị ụlọ ikpe anaghị anapụ ndị nne na nna ikike ụmụ ha. Emere iwu ndị a site n'aka ndị ezinaụlọ site na mkpesa nke ndị nne na nna ụmụaka (Charedi 2013).
A ga-ahụrịrị nchegbu banyere ịdị mma nke agụmakwụkwọ Lev Tahor gosipụtara n'ọnọdụ nke nsogbu ogologo oge achọpụtara na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ Haredi dị na Montreal, nke na-emezughị ihe ọmụmụ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke Ngalaba Mmụta Quebec. Dị ka ọ bụla, dị ka obodo okpukpe ndị ọzọ na-achọghị ọdịmma onwe ha, Haredim na-echebe ụmụ ha ka ọ ghara inweta ya ma zere ịkụzi ihe (dị ka okpukpe mkpakọ, echiche evolushọn ma ọ bụ mmụta mmekọahụ) nke dị iche na nghọta ha banyere ụkpụrụ omume ndị Juu ma ọ bụ nkwenye. A na-akụzikarị ụmụ nwoke dị afọ iri na ụma, na Lev Tahor na ebe ndị ọzọ Okpukpere nke okpukperechi na iwepu otutu akwukwo. Ihe onyonyo dị n'aka nri] Otú ọ dị, ọ bụ naanị banyere Lev Tahor ka ụlọ ọrụ nchebe ụmụaka chọrọ iwepụ ụmụaka n'ụlọ ndị nne na nna.
N'ịtụ egwu na a ga-ejide ụmụ ha iri na anọ, Lev Tahor ndị nne na nna nwere ụmụ na-erubeghị isi gbagoro Quebec maka Chatham, Ontario, nke nwere ikike nchịkwa dị ala karịa ogo nke agụmakwụkwọ ọzọ. Helbrans mechara soro ha na Chatham. N'otu oge ahụ, na November 2013, ndị ọchịchị Canada nyere iwu nzuzo na-egbochi ụmụaka Lev Tahor a mụrụ na Canada ịhapụ Canada, na-enye iwu na ndị ọkachamara iwu kwuru na ọ bụ "oke aka ma na-awụ akpata oyi" (Alamenciak na Woods 2014). Onye ọka ikpe na Ontario kpebiri na akwụkwọ ikpe metụtara Lev Tahor kwesịrị ka ọ bụrụ ihe nzuzo (Gillis 2016).
Mgbe ndị ọchịchị Ontario yiri egwu ịmanye mkpebi nke ụlọ ọrụ nchebe ụmụaka na Quebec ma wepụ ụmụaka n'ụlọ ha, Hasidim nke Lev Tahor gbagara Guatemala. (The Jerusalem Post gosiri n'ụzọ na-ezighi ezi na ha agbaga Iran, nke gọọmentị Israel lere anya mgbe ahụ dị ka "ihe iyi egwu dị adị" (Izso 2013). E jidere ọtụtụ ụmụaka na Trinidad na Tobago n'ụzọ Guatemala ma laghachi Canada. Abụọ ọzọ, nne ejidere 17 na nwa ya ka ejide ya na Calgary. Thusmụaka si otú a kewapụ onwe ha na nne na nna ha debere nlekọta. Thelọ ikpe anabataghị arịrịọ ha iso ndị obodo mee Ngabiga. Offọdụ n’ime ha kwụsịrị iri nri iji mee mkpesa megide mwepụ ha na Lev Tahor na ndị mụrụ ha (Nke atọ 2014).
Ebe otu United Nations kọwara na "ịkwanye ụmụaka nke otu a n'ike," arụrịta ụka, na iwepụ ụmụaka ugboro ugboro na Lev Tahor na-enweghị ihe akaebe egosipụtara nwere ike iru eru dị ka ogbugbu agbụrụ. N’ezie, onye ọka ikpe nke Ontario onye mesoro ikpe Lev Tahor mgbe ha kwagara Quebec kwusiri ike na ihe dị n'okwu bụ mmegide nke otu site na ụmụ ya (Forte 2014). [Foto dị na aka nri]
Nkọwa dị n'okwu a dị elu na Canada, ebe a napụrụ ndị ntorobịa nke ụmụaka mbụ site na obodo ha iji 'mepe anya' dị ka mgbukpọ agbụrụ. (Spratt 2019) A ka nwekwara akụkọ banyere ọchịchịrị nke Doukhbor, obodo okpukperechi nke pacifist, nke hụrụ ndị ọchịchị obodo na British Columbia napụrụ ya ụmụ ya na ọtụtụ afọ (Ombudsman 1999). Vingwepụ ụmụaka n'ime otu ahụ ga-abụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji kpochapụ Lev Tahor. A makwaara ndị ọchịchị Israel na-ewepụ ụmụ ndị amụrụ ndị Juu Arab, na-agwa mgbe ahụ na ụmụ ọhụrụ ahụ nwụrụ, na-edebe ha na ezinụlọ nke mmịpụta Europe. Emere nke a iji wedata mmetụta ọjọọ nke ọdịnala ndị Juu na Arab si banyere mmezi nke ọha Israel dị ka ndị ndu nke Zionist nke mba ahụ tụụrụ (Weiss 2002: 61; Halevi Klein 1996: 14-19).
Ọtụtụ n'ime ndị otu nọ na Lev Tahor, ihe dị ka ndị 150, ebiri n’otu ọdọ mmiri dị na Guatemala, mana a gwara ha ka ha pụọ ​​mgbe ọnwa ole na ole gachara maka mmeghachi omume nke ndị amaala obodo banyere ichebe ọdịbendị ha (Woods August 29, 2014). Emechara kọrọ ha ka ha biri na Guatemala City na steeti Mexico nke Chiapas. Na Septemba 2016, na-aza na akara sitere n'aka ndị ọchịchị Israel, ndị uwe ojii Guatemala wakporo ọtụtụ ụlọ nke ndị na-eso ụzọ Lev Tahor mana ọ nweghị ihe ọ bụla na-enyo enyo. Mgbe ndị isi Israel rịọrọ ka a nwụde ụmụaka niile nọ n’obodo ahụ ma kwuo na ha ga-ebuga ha Izrel, ndị isi Guatemalan jụrụ arịrịọ ha. A kọrọ na, ndị ọrụ Israel agbasowo Lev Tahor gaa Guatemala na Mexico, na-egbochi ịzụta ihe onwunwe ebe ahụ (“More On” 2017). Dabere na onye ọka iwu Canada nke gara Guatemala, ịchụ Lev Tahor bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okike (Watch 2016). Tupu njem ụgbọ elu Lev Tahor si Canada, onye omeiwu nke Ontario kwadoro na ntinye aka nke ụlọ ọrụ nchebe ụmụaka bụ “okwu metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị,” na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Canada na ndị uwe ojii obodo ahụ (Patis 2014) na-akpakọrịta.
Ná mmalite afọ 2017, ụlọ ikpe dị n’Izrel mechara kpebie ikpe afọ ise na Lev Tahor bụ “òtù nzuzo dị ize ndụ.” Mkpebi ụlọ ikpe a kwadoro nkwado nke ndị ikwu na-ekweghị okpukpe Lev Tahor Hasidim mere iji wepụ ụmụaka na Lev Tahor ma kpọta ha n'Izrel. Ọ bụ ezie na ọ bụ nanị ezinụlọ abụọ ka e kwuru na ha bụ ndị a na-azara ọnụ, mkpebi ikpe ụlọ ikpe, nke akụkụ ya ka bụ ihe nzuzo, kwuru ka ewepụ ụmụaka niile nke Lev Tahor na ndị mụrụ ha. Thelọ ikpe ahụ tozuru obodo Guatemalan nke Oratorio, Ngalaba Santa Rosa, ebe obodo ahụ nwetara, dị ka "oke ọhịa." Onye bụbu Mịnịsta Ala Israel Ehud Barak ji Israel tụnyere "obodo ime obodo n'ime ọhịa". N'iji Israel "mepere anya" na "obodo" na ndị Arab agbata obi Israel na "ọhịa" na-egosipụta omume orientalist nke a na-ahụkarị na steeti Zionist, nke na-emetụtakwa ọgwụgwọ nke Lev Tahor ebe ahụ.
Na 2018 na 2019, enwere ọtụtụ ọpụpụ na Lev Tahor. Otu n'ime ha gụnyere nwa nwanyị nke onye guzobere Lev Tahor onye kpọọrọ obere ụmụ ya gaa United States mgbe ọ hapụsịrị di ya na Guatemala. Emesịrị ụmụaka ndị a mechara nwute iweghachi nna ha. Ndị ahụ tọọrọ ụmụaka gụnyere ọtụtụ ndị isi Lev Tahor. Ejidere ha ma tinye aka na New York (Oster 2019).
Ugbu a, n'agbanyeghị mbọ niile ndị ọchịchị Israel na-eme iji bibie Lev Tahor, enwere ike ịchọta ndị otu ya na Britain, Canada, Guatemala, Israel, Mexico, El Salvador na United States. Ọ bụ ezie na ọnweghị ọnụọgụ ọnụọgụgụ anaghị adị, ma eleghị anya obodo kachasị buru ibu na-ebi Southwest Guatemala.
** Ndị dere akwụkwọ ahụ kwenyere na ndụmọdụ dị na ntinye akwụkwọ mbụ nke ntinye a sitere n'aka Prọfesọ Ariel Stravynski na Yaacov Yadgar yana Miriam Rabkin.
Foto #1: Nchoputa Rebbe nke Lev Tahor Shlomo Helbrans.
Onyinyo #2: Yakov Rabkin na-agba Shlomo Helbrans ajụjụ ọnụ.
Foto #3: Mkparịta ụka n’etiti ndị otu obodo.
Onyonyo #4: Umu nwanyi na umu agbogho nke Lev Tahor.
Ihe onyonyo #5: Onye otu Lev Tahor n’ekpere ubochi.
Onyonyo #6: Yakov Rabkin na-agba ajụjụ ọnụ Uriel Goldman.
Ihe osise #7: Bomụ nwoke nke Lev Tahor.
Foto #8: Sabbathbọchị izu ike.
Alamenciak, Tim. 2014. "Lev Tahor ụmụaka kwuru okwu na nke mbụ." Toronto Star, Jenụwarị 16.
Alamenciak, Tim na Allan Woods. 2014. Iwu nzuzo nke Lev Tahor na-egbochi ụmụaka ndị isi ịhapụ Canada. " Toronto Star April 10.
"Choredi Ezinwanyi Gbalịrị ike isi Canada gafee Jọdan." 2013. Hiwa Yeshiva, May 24.
Cohen Yirmiyahu. 2019. Okwu Mmalite banyere Sefer Vayoel Moshe, Brooklyn, NY: Ezigbo ndị Juu Torah.
Dumais, Jacques. 2015. Etinye sur l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse et de ses partenaires auprès de la communauté Lev Tahor et dans des milieux potentiellement sectaires. Nweta site na http://www.cdpdj.qc.ca/fr/medias/Pages/Communique.aspx?showItem=678 na 1 September 2019.
Efron, Noa. 1991. "Egwu Dị Egwu: Lee ka ndị Israel Isi Na - ahụ Ultra-Orthodox, N'ihi Gịnịkwa." Tikkun 6:15-22, 88-90.
Ike, Maximilian. 2014. "Na-elekwasị anya Lev Tahor, site na Israel na Canada". Zero Anthropology. Nweta site na https://zeroanthropology.net/2014/04/26/targeting-lev-tahor-from-israel-to-canada/ na 1 September 2019.
Gillis, Wendy. 2014. E kweghị ka ndị na-eme mgbasa ozi nwee ike detuo ihe ederede Lev Tahor. Toronto Star, March 19.
Halevi Klein, Yossi, Toronto Star. 1996. “Olee ebe Childrenmụ Anyị Nọ?” March 21.
Hart, Alan. 2015. Zionism: Ezigbo Iro nke ndị Juu. Atlanta, GA: Clarity Press, mpịakọta atọ.
Helbrans, Shlomo, 2011. Ohr Hashem, Sainte-Agathe-des-Monts, Qc: Da'at.
Helbrans, Shlomo, 2001. Derech Hatzolo, Jerusalem, Israel: Da'at
Hisachdus Hayereim na Ọfịs nke Derech Hatzolo. 2002. Sainte-Agathe-des-Monts, Qc: Da'at.
Izso, Lauren. 2013. "Ultra-Orthodox-emegide obodo Zionist gbaara Quebec maka Iran." Jerusalem Post, November 22.
Kroth, Maya. 2016. "Akụkọ nke Obi Dị Ọcha." Omenala mba ọzọ, January 25. Nweta site na
https://foreignpolicy.com/2016/01/25/a-tale-of-the-pure-at-heart-guatemala-israel-lev-tahor-judaism-religion/ na 1 September 2019.
"Ndị agha gbasara iwu metụtara okirikiri nke Lev Tahor - AKA 'Womenmụ nwanyị ndị Taliban nke ndị Juu'." 2011. Hiwa Yeshiva, October 5..
"More na Ọnwụ na Levaya nke 'Lev Tahor' Onye ndu Chip Shlomo Helbrans ahụ dara na Mexico." 2017. Hiwa Yeshiva, June 11,
Ombudsman Province nke British Columbia. 1999. Nkwupụta Ọha na eze Nke 38: Idozi na ya mejọrọ: Mkpuchi nke ofmụ nke Freedom Doukhobor.
Oster, Marcy. 2019. Egosipụtara maka nrigbu ohi. ” Jerusalem Post, July 31.
Patis, Ashton, 2014. "Lev Tahor Okwu gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị." Blackburnnews.com, March 31. Nweta site na https://blackburnnews.com/chatham/chatham-news/2014/03/31/lev-tahor-a-political-issue/ na 1 September 2019.
Ajụjụ Ọnụ Nkeonwe. 2011. Yakov Rabkin na Estela Sassón duziri ọtụtụ ajụjụ ọnụ na May 2011 na Sainte-Agathe.
Rabkin, Yakov. 2006. Ihe Iyi Egwu diri n’ime: Otu Narị Afọ nke Mmegide Ndị Juu na-emegide Zayọn, London: Zedbooks.
Ravitzky, Onye nyocha. 1996. Mesaya, Zaịọn na Radicalism ndị Juu. Chicago: University nke Chicago Pịa.
Onyegbula, Michael. 2019. "Usoro ọgwụgwọ Canada maka ụmụ amaala dabara nkọwa 'mgbukpọ'." Onye ọka iwu Canada, June 10.
“Nwatakịrị nke atọ na Lev Tahor Cult onye agụụ na-agụ gaa ụlọ ọgwụ.” 2014. Hiwa Yeshiva, March 11.
Weiss, Meira. 2002. Isi ahọpụtara: The ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Ahụ na Israel Society. Stanford, CA: Stanford University Press.
"Lelee: Onye ọka iwu Lev Tahor na-agbachitere ọgbakọ." 2016. Hiwa Yeshiva, Septemba 21.
Osisi, Allan. Mee 14, 2014. "Kọmitii na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ nke Quebec na-eleba anya n'ihe na-ezighị ezi n'okwu ikpe Lev Tahor." Toronto Star, May 14.
Osisi, Allan. August 29, 2014. "Ndị otu ndị Juu Lev Tahor chụpụrụ na Sanate dị nsọ Guatemala." Toronto Star, August 29